तथ्यांकले देखायो : ओलीले नेपालमा लगाएको कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा मंहगो, ओली भन्छन्, ‘सस्तो हो’-Nepali online news portal
तथ्यांकले देखायो : ओलीले नेपालमा लगाएको कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा मंहगो, ओली भन्छन्, ‘सस्तो हो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगाउने गरेकाे कर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा मंहगाे भएकाे विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
तर अाेलीले केही दिन अघि नेपालमा लगाइएको कर संसारमै सस्तो भएको सार्वजनीक रुपमै बोलेर झुठ बाेलेका थिए । आधिकारिक विवरणहरुले भने ओलीको भनाइ गलत रहेको देखाएको छ । विवरण अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो कर लाग्ने देश बन्न पुगेको छ ।
नेपालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४-७५ अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा लाग्ने कर २३.१ प्रतिशत रहेको छ ।
विकिपेडियाका अनुसार यो कर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो। दक्षिण एसियामा माल्दिभ्सको जीडीपीको आधारमा लाग्ने कर २०.५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालपछि सबैभन्दा बढी कर लाग्ने मुलुक माल्दिभ्स हो ।
त्यसैगरी भारतमा १७.७ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा ११ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा ६.४, बंगलादेशमा ८.५, भुटानमा १०.७, श्रीलंकामा ११.६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा बढी कर लाग्ने मुलुक रहेको पुष्टि गर्छ ।
विश्वको सबैभन्दा बढी कर लाग्ने मुलुक नर्वे हो । यहाँ ५४.८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । फिनल्याण्डमा ५४.२ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । डेनमार्कमा पनि ५०.८ प्रतिशत करको व्यवस्था रहेको छ । यि देशहरुमा कर बढी भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतको सामाजिक सुरक्षा सरकारको जिम्मा रहने गरेको छ।
चीनमा २०.१ प्रतिशत करको व्यवस्था रहेकोमा अमेरिकामा २६ प्रतिशत करको व्यवस्था छ ।
होण्डाई भेन्यु गाडी (लन्च)सार्बजनिक (भिडियो सहित)
सेकेनहेन्ड गाडी किन्दै हुनुहुन्छ ? किन्दा यी ५ गल्तिले गइएला जेल !
यति ठूलो व्यापार घाटा : १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब, ओलीज्यू, देश यसरी उभो लाग्छ ?
९ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब, झण्डै २ खर्ब बराबरको पेट्रोलियमको आयात
बिल गेट्सको नाघ्यो १ सय अर्ब डलर सम्पति, बेजोस र बिल गेट्सको मात्र साढे २ सय अर्ब डलर
यस वर्ष पनि नेपालको व्यापार घाटा झन् बढ्यो : ६ महिनाको व्यापार घाटा ७ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड